Skriftlærde - Norveççe - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: skriftlærde (Norveççe - Birmanca)
På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.
ကျမ်းပြုဆရာ၊ ဖာရိရှဲတို့သည် မောရှေ၏ထိုင်ရာ ပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်ကြ၏။
Men nogen skriftlærde satt der og tenkte i sine hjerter:
Og yppersteprestene og de skriftlærde stod og klaget hårdt på ham.
ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးနှင့် ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် ထ၍ ပြင်းထန်စွာ အပြစ်တင်ကြ၏။
Da kom fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: Mark.
ထိုအခါ ယေရုရှလင်မြို့သားဖာရိရှဲတို့နှင့် ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင်၊
အကြောင်းမူကား၊ ကျမ်းပြုဆရာနည်းတူမဟုတ်၊ အစိုးရသော သူနည်းတူ ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။
Og se, nogen av de skriftlærde sa ved sig selv: Denne spotter Gud.
ကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့က၊ ဤသူသည် ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ ပြောသည်ဟု ထင်ကြ၏။
Likeså spottet også yppersteprestene tillikemed de skriftlærde og de eldste ham og sa:
ထိုနည်းတူ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲတို့က၊ ဤသူသည် သူတပါးတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။
Da svarte nogen av de skriftlærde og sa: Mester! du taler vel.
ကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏စကားသည် လျှောက်ပတ်ပါ၏ဟု လျှောက် ကြ၏။
နက်ဖြန်နေ့ရောက်သော် မင်းအရာရှိ၊ လူအကြီးအကဲ၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့်၊
Og fariseerne og nogen av de skriftlærde, som var kommet fra Jerusalem, samlet sig om ham.
ထိုအခါ ဖာရိရှဲတို့နှင့် ယေရုရှလင်မြို့မှရောက်လာသော ကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့သည် အထံတော်၌ စု ဝေး၍၊
Og de spurte ham og sa: De skriftlærde sier jo at Elias først må komme?
ထိုအခါ တပည့်တော်တို့က၊ ဧလိယသည် အရင်လာမည်ဟု ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဆိုပါသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြလျှင်၊
Og de førte Jesus til ypperstepresten, og der kom alle yppersteprestene og de eldste og de skriftlærde sammen.
ထိုသူတို့သည် ယေရှုကို ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းထံသို့ ဆောင်သွားကြ၏။ ထိုမင်းထံ၌ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီး၊ လူအကြီးအကဲ၊ ကျမ်းပြုဆရာအပေါင်းတို့သည် စည်းဝေးကြ၏။
Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne frem for ham
မှားယွင်းခြင်းအမှုကို ပြုလျက်နေသောမိန်းမတယောက်ကိုတွေ့လျှင်၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့် ဖာရိရှဲတို့ သည်ခေါ်ခဲ့၍ အလယ်၌ထားပြီးမှ၊
ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင် ကျမ်းပြုဆရာရှိသမျှတို့ကို စုဝေးစေ၍ ခရစ်တော်ကို အဘယ် အရပ်မှာ ဘွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟု မေးမြန်းတော်မူ၏။
Og da de kom til disiplene, så de meget folk om dem, og nogen skriftlærde som trettet med dem.
တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ ရောက်တော်မူသောအခါ များစွာသောလူအစုအဝေးသည် သူတို့ကို ဝိုင်းလျက်၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသည်ကို မြင်တော်မူ၏။
ထိုအခါ တပည့်တော်တို့က၊ ဧလိယသည် အရင်လာရမည်ဟု ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဆိုပါသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြလျှင်၊
ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သို့သတ်ရအံ့နည်းဟု ရှာကြံရကြသနည်းဟူမူကား၊ လူများတို့ကို ကြောက်ကြ၏။
မိုဃ်းလင်းသောအခါ လူတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သောသူ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့ သည် စည်းဝေး၍ ကိုယ်တော်ကို လွှတ်တော်သို့ ဆောင်သွားပြီးလျှင်၊
Og de kom atter til Jerusalem. Og da han gikk omkring i templet, kom yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste
ယေရုရှလင်မြို့သို့ တဖန်ရောက်ကြပြီးမှ ဗိမာန်တော်တွင် စင်္ကြံသွားတော်မူစဉ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲတို့သည် အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍၊
ငါတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။ လူသားသည် ယဇ်ပုရောဟိတ် အ ကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့လက်သို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုသူတို့သည် သေပြစ်ကို စီရင်ကြလိမ့်မည်။
matalaenerginen (Fince>Portekizce)hwz u (Hintçe>İngilizce)santi protettori (İtalyanca>İngilizce)video za x za bo ngo 2017 (Svahili>İngilizce)doon ako nag graduate (Tagalogca>İngilizce)résilier bail (İngilizce>Hollandaca)ngiyakwazi (Zulu>İngilizce)matagal na order ung parts (Tagalogca>İngilizce)korsförsäljningen (İsveççe>İngilizce)intensive form love (İngilizce>Afrikanca)what happen? (İngilizce>Hintçe)tôi có thể sửa đổi nội dung này (Vietnamca>İngilizce)chloroform (İngilizce>Estonca)izokinetické (Çekçe>İngilizce)maria non ho il cellulare (İtalyanca>İngilizce)all vegitable (Bengalce>İngilizce)you were supposed to call me on today (İngilizce>Hintçe)putang ina mo (Tagalogca>Tayca)in motu (Latince>İtalyanca)美術館の中 (Japonca>İsveççe)compararse (İspanyolca>Macarca)ich werde aus den ferien zurück sein (Almanca>İngilizce)enteravalid date (İngilizce>Portekizce)xx bf bangla full mp4 video (Hintçe>İngilizce)jesper (Almanca>İngilizce)